स्वास्थ्य पेजलिपिस्टिक कसरी लगाउने ? - स्वास्थ्य पेज लिपिस्टिक कसरी लगाउने ? - स्वास्थ्य पेज
लिपिस्टिक कसरी लगाउने ?
सामन्यतया: हरेक महिलाहरुले दैनिक रुपमा शुन्दर र आर्कषक देखिनको लागि सवै स्तरका लिपिस्टिक प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । जुन श्रृङगारको सामाग्री मध्ये एक हो । हामीले कुनै पनि चिज सहि तरिकाले प्रयोग भएन वा राम्रोसँग गरेन भने आकर्षक देखिदैन । अझ भनौ विवाह, पार्टि वा कूनै विषेश सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा जाँदा महिलाहरुले लिपिस्टि लगाउदा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
सबैभन्दा पहिले लिपिस्टिक लगाउँदा ओठ सुख्खा वा फोटेका छन्, छैनन् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। नत्र फुटेका ओठमा भित्रसम्म लिपिस्टिक गएर ओठको सुन्दरता नै विग्रीन सक्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा ओठमा लिप बाम वा ग्लिसरीनलगायर मात्र लिपिस्टिक लगाउनुपर्छ। यस्तो गर्दा फाटेका ओठमा पनि लिपिस्टिक सुन्दर देखिन्छ।